Skoto - Wikipedia
Mpitari-dàlana, mpisafo tany, mpamaky lay,... ireo no azo andikana ny teny hoe "Skoto" raha ara-bakiteny. Rehefa miady ny miaramila dia ireo no olona alefa mialoha mba handinika ny toe-java-misy mandrapahatonga any amin'ny fahavalo.
I Baden Powell dia lehilahy iray anisan'ny iray tamin'ireo miaramila nanana izany anjara asa izany fony izy mbola tanora vao herotrerony. Nony taty aoriana anefa dia tapa-kevitra ny hanangana fikambanana iray izy ho fitaizana ny tanora zazalahy miainga avy amin'ny foto-pisainana Skoto.
Miparitaka maneran-tany io fikambanana io ankehitriny ary maro ny fikambanana mijoro eto Madagasikara mandala ny skotisma izay najoron'i BP. Eto Madagasikara dia misy fikambanana maromaro mifandray amin'ny Birao Manerantanin'ny Skotisma (BMS).
Skotisma Zazavavy eto Madagasikara
Fikambanana Skoto eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Skoto&oldid=965271"
Voaova farany tamin'ny 23 Janoary 2019 amin'ny 10:55 ity pejy ity.